Geary: Mpanjifa mailaka vaovao [+ Fametrahana amin'ny Debian] | Avy amin'ny Linux
Geary: mpanjifa mailaka vaovao [+ Fametrahana amin'ny Debian]
Geary dia natao ho a Mpanjifa mailaka hazavana ho an'ny GNOME, ary raha tsy diso aho dia nateraky ny firaisana tamin'i Yorba miaraka amin'ny tetikasa fototra.
Geary mbola tsy ampy fampiasa io. Amin'izao fotoana izao dia azo ampiasaina amin'ny kaontin'ny IMAP de Google y Yahoo, na dia azontsika atao aza ny mamaritra ny doka mahazatra amin'ny safidy «Hafa». Tsy mbola misy fanohanana ny firaketana, kaonty mailaka iray ihany no azo alamina, ary tsy manana safidy hikarohana hafatra isika, izany hoe mbola tena fampiharana fototra io. Ny zavatra tiako dia ny fisehoan'ny hafatra amin'ny endrika resadresaka.
Izy io koa dia mametra kely antsika, indrindra rehefa manoratra hafatra.
Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka miantehitra amin'ireto toe-javatra manaraka ireto ihany izahay:
Safidy karazana endritsoratra telo.
Safidin'ny haben'ny endritsoratra telo.
Fomban-tsoratra fototra (sahisahy, tsipika, strikethrough, sns).
Bokotra hanesorana ny endrika format.
Fanitsiana ny tsipelina.
1 Fametrahana amin'ny Debian
2 Fametrahana amin'ny Ubuntu
Fametrahana amin'ny Debian
Raha na dia misy aza ireo fetrany ireo dia maniry ny hizaha toetra azy amin'ny Debian isika dia tsy maintsy manao izao manaraka izao:
1.- Manokatra terminal izahay ary mametraka:
Miaraka amin'izany, ny ataonay dia misintona ny rindranasa sy tranomboky sasany ao amin'ny trano fitehirizan-trano Debian Testing, tsy manana ilay kinova naroson'i Geary ary apetrakay izy ireo avy eo.
Fametrahana amin'ny Ubuntu
En Ubuntu Tsotra kokoa ilay zavatra. Manokatra terminal izahay ary mametraka:
sudo apt-get fanavaozana && sudo apt-mahazo mametraka geary
Marihina fa mbola tsy manana fanampiana i Geary Houd ni Unity amin'ny ankapobeny
Raha tsy irery aho IMAP Hampiasaiko tsy misy olana izany. Naniry foana aho Thunderbird manana interface toa ity, fa hey, tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Geary: mpanjifa mailaka vaovao [+ Fametrahana amin'ny Debian]
vitolbiriuk dia hoy izy:
Tadidiko fa ny tetik'asa fanabeazana fototra dia niasa tamin'ny mpanjifany mailaka, Postler. Heveriko fa hanaraka an'io andalana io i geary. Faly aho amin'ity fivoarana ity, satria mila safidy maivana sy azo ampiasaina amin'ny thunderbird mavesatra isika. Mampiasa claws-mail aho amin'izao fotoana izao, maivana ary miaraka amin'ny fanitarana maro izay mahatonga azy ho azo alamina tsara, na izany aza, amin'ny fizarana sary dia mamela zavatra maro irina izy, tena "azo antoka" fa tsy manana safidy hanehoana hafatra amin'ny fomba firesaka, ifotony ho ahy, ary ny famakiana imailaka amin'ny html dia mila fanitarana izay tsy maharesy lahatra ahy koa.
Mamaly an'i vitolbiriuk
Tsy marina, ao amin'ny tetikasa Elementary dia te hampiasa ny backy Geary sy ny Front-end azy ireo miaraka amin'ny Postler izy ireo. Raha mamaky ny bilaoginy ianao dia afaka mahita azy, dia mifanakaiky be ny ekipa roa tonta.
Mamaly an'i FerreryGuardia
Tsy mampiasa client email mihitsy aho
Mitovy! Amin'ity fotoana ity dia tsy hitako ny dikany. Jereko amin'ny Internet ny zava-drehetra.
Manana ny mailaka rehetra amin'ny solosainao manokana ... tsy haiko, fa mahazo aina kokoa ho ahy izy io, ary azo antoka kokoa aza 🙂
Ao anatin'ny orinasa iray dia ilaina ny mpanjifa mailaka, ohatra:
Raha amin'ny fotoana iray tsy mandeha ny fifandraisana internet dia te hahita ny mailaka ny mpampiasa iray, mazava ho azy izy ireo dia ho afaka hahita ireo izay navoak'izy ireo teo aloha avy amin'ny mpanjifany tiany kokoa, raha toa ka hijerena ireo mailaka amin'ny alàlan'ny browser izy ireo dia tsy hahita izany. afaka mifandray.
Ny dikany dia amin'ny fampiasanao azy.
Raha Geary dia iray amin'ireo fangatahana tetikasa Elementary, dia hajanona i Postler ary ity no mpanjifa mailaka ao amin'ny Luna, na izany aza dia heveriko ho toy ny kandidà beta sy fitiliana amin'izao fotoana izao. Manantena aho amin'ny fotoana namoahana an'i Luna (araka ny tsaho fa mety ho vonona amin'ny famoahana ny Ubuntu 12.10) izy io dia ho matotra sy miasa kokoa, na dia mazava ho azy aza, miahiahy aho fa hiova i Thunderbird 🙂
mafuns dia hoy izy:
Tsy haiko raha izany offtopic Fa raha izany dia lazao aho azafady. Fotoana vitsy lasa izay dia nanontany tena aho raha hisy serivisy mailaka misokatra (fa tsy mpanjifa toa an'i Thunderbird na Geary)? Nieritreritra an'io aho rehefa nahazo picky kely momba ny google. Nanova ny browser-na ny default (www.ddg.gg), novaiko ho chromium ny browser-ko (tsy haiko hoe betsaka izany, fa farafaharatsiny maimaim-poana tanteraka izany) fa rehefa tonga tany amin'ny mailaka aho dia tsy nahita safidy maimaim-poana.
Valiny amin'ireo mafun
Andramo miaraka http://www.riseup.net 😉
Ostia, inona ny kopia nataon'izy ireo nandefa azy, saika nitovy io, tsara be nefa mahamenatra fa tsy dia be fampiasa io ary ho an'ny gnome, indrisy indroa
Heveriko fa tsara fa tsy manova ny icedoveko na inona na inona aho, manampy ahy hiasa, troll, spam sns.
Mihoatra ny fampiharana mailaka dia tiako ny iray izay misy kalandrie ary afaka mifanentana amin'ny Google Kalandrie / Google Tasks: SY raha maivana dia tsara kokoa ...
Misaotra ny mpitari-dalana, mitady mpanjifa ho an'ny Crunchbang aho.
Manoro hevitra aho fa raha mila misintona rakitra ianao dia mamorona lahatahiry ho an'ireo rakitra ireo, satria alao sary an-tsaina ny fihazakazahana
Ary ny mpampiasa dia tsy manana an'io mpivady Debs io ao an-trano ihany 😛
Salama, manavao ny baiko ho an'i Debian aho
[Torohevitra fiarovana]: Mampidi-doza ho antsika ihany ny Internet, araka ny hamelantsika azy azy
Nitro: mpitantana asa minimalista tsara tarehy